नेकपाको भोलिको सचिवालय बैठक स्थगित् नहुने, यस्तो छ दाहाल-नेपालको तयारी – Democracy Nepal
नेकपाको भोलिको सचिवालय बैठक स्थगित् नहुने, यस्तो छ दाहाल-नेपालको तयारी
2 months ago Hom Prasad Acharya
काठमाडौं, २ मंसिर । भोलि अपरान्ह १ बजे तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित् नहुने भएको छ । यसअघि पार्टीका महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर भोलिको सचिवालय बैठक स्थगित् गर्नेबारे प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर, दाहालले जवाफमा कुनैपनि हालतमा बैठक नराक्ने अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक राख्नको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेका छन् । यसअघिको सचिवालय बैठकमा दाहालले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनले नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
ओली पक्षधर नेताहरुले दाहालको प्रस्तावलाई गैरराजनीतिक र अवैधानिक प्रस्तावको संज्ञा दिएका छन् । र, उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठक नै नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कुनैपनि हालतमा भोलिको सचिवालय बैठक नरोक्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यतिमात्रै होईन, दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा आफूहरुको पनि सहमति रहेको सचिवालयका ४ सदस्यहरुको भनाई छ । FILE PHOTO
Previous काेराेना कहरकाे बीचमा भाइटिका काे राैनक
Next शसस्त्र प्रहरी द्धारा अवैध रुपमा भन्सार छली रु. १ लाख ५० हजार बराबरको समान पक्राउ
वैशाखमा चुनाव हुन्छ नहुने बाताबरण खडागरे संकटकाल !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सुदुर पश्चिम प्रदेश पार्टी को रु तीस लाख भिम रावलको निर्देशनमा चोरी -कर्ण थापा
शारीरिक अशक्त ब्यक्तिहरु लाई घोडाघोडीमा न्यानो कम्बल बितरण
6 hours ago Hom Prasad Acharya
19 hours ago Hom Prasad Acharya
20 hours ago Hom Prasad Acharya